Maxaa kasoo baxay kulankii ay Maurizio Sarri, Cristiano Ronaldo & Fabio Paratici ku yeesheen xeebaha faransiiska?? – Gool FM
Maxaa kasoo baxay kulankii ay Maurizio Sarri, Cristiano Ronaldo & Fabio Paratici ku yeesheen xeebaha faransiiska??
(Greece) 22 June 2019. Tababaraha cusub ee Juventus Maurizio Sarri ayaa booqday Cristaino Ronaldo oo fasax ka fasaxan waajibaadka kubadda cagta heerka koox iyo qaranba si ay uga wada hadlaan doorka cusub uu xiddigaan ka ciyaari doono fasalka soo aadan, durba saxaafadda talyaaniga ayaana qoray “CR9”
Ilo wareedyo kala duwan oo ay ku jiraan La Stampa, Corriere della Sera & Gazzetta dello Sport ayaa qiraya in Maurizio Sarri iyo agaasimaha ciyaaraha kooxda marwada duqda ah Fabio Paratici ay u duuleen jimcahii Cote d’Azur meesha la yiraahdo oo ku taala dhanka koonfureed ee faransiiska.
Saddexdaan shaqsi waxey ku kulmeen dooni raaxo oo uu leeyahay xiddiga reer Portugal, waxaana la fahamsan yahay iney ka wada hadleen waxyaabo badan oo quseeya doorka uu ka ciyaari doono, macalinkii hore Napoli ayaana doonaya inuu CR7 fasalka soo aadan jabiyo rikoorkii Higuain ee ahaa inuu 36 gool ka dhaliyo Serie A-da hal fasal.
Warbixinta lasoo gudbiyay waxey qireysaa in Ronaldo laga soo wareejin doono garabka, iyadoo loosoo guurin doono lambarka 9-aad ee beenta ah sida uu dhawr jeer u isticmaalay Dries Mertens iyo Eden Hazard oo ka wada tirsan qaranka Belgium-ka.
Sarri ayaa saxaafadda u xaqiijiyay in qorshe ciyaareedkiisa uu yahay 4-3-3 ama 4-3-1-2, wuxuuna aad u isticmaalay waqtigiisii kooxda Napoli.
Macalinkaan wuxuu doonayaa in xiddig walba uu la qabsado xeeladiisa, wuxuuna jecleystay inuu wax walba u sharraxo Ronaldo oo ka mid ah shaqsiyaadka ay saameynta ku yeelan doonto.
“Ma jiro xiddig buuxin kara booska Ronaldo” – Morientes oo ka hadlay imaatinka Hazard ee kooxda Real Madrid
Miyey kooxda Manchester City awooddaa iney kooxaha qaaradda yurub ka dulqaado saxiixa Kalidou Koulibaly?